မိမိတို့နှစ်သက်သော ဘလော့ဆိုဒ်များအား Android ဖုန်းများတွင် Online/Off line ကြည့်နိုင်ရန် APK လုပ်ယူနည်း - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home BLOG မိမိတို့နှစ်သက်သော ဘလော့ဆိုဒ်များအား Android ဖုန်းများတွင် Online/Off line ကြည့်နိုင်ရန် APK လုပ်ယူနည်း
Aung Ko Htet at 2:53:00 PM BLOG,
Anonymous August 11, 2013 at 1:02 AM
Android လုလင် August 11, 2013 at 2:15 PM
feed link ယူလို့ရရင် ရပါတယ်
php နဲ့ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖိုရမ်တွေတောင် ရပါတယ်
အဓိကက feed link ပေါ့နော်
Aung Ko Htet August 12, 2013 at 12:49 PM
ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို ပြောသလိုပါပဲဗျ။ ရပါတယ်။ (ပြန်လည်၍ ထောက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ :P )
.com ဆိုဒ်တွေရော ရတယ် ကျနော်စမ်းလုပ်ပြီးအဆင်ပြေသွားပြီ ကျေးဇူးပါ(အားလုံး)
facebook pages link ဘယ်လိုလုပ်လည်းဗျ ကူညီပါအုံး
Unknown August 16, 2013 at 8:54 AM
အကိုရေ မေးထဲမှာ သွားးဒေါင်းရမှာ ဆိုလို့သွားဒေါင်းတာမတွေဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ ကူညီပါအုံး
မောင်ပေါက် August 16, 2013 at 10:45 AM
ko kyaw : appyet.com မှာ Register လုပ်တဲ့ အီးမေးထဲကို ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်.. Build လုပ်မှ ပို့ပေးတာပါ.. Build ထဲက Submit to Build ကိုနှိပ်ပြီး ၁ မိနစ်တောင်မစောင့်ရပါဘူး.. ကိုယ့်အီးမေးထဲကို ရောက်လာတာပဲခင်ဗျ.. ပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါအုံး.. အဆင်ပြေမှာပါ..
Unknown August 16, 2013 at 4:39 PM
ဘလော့မင်းသားလေး August 17, 2013 at 12:15 AM
ဘလော့မင်းသားလေး August 17, 2013 at 12:23 AM
ကိုမောင်ပေါက် ဗွီဒီယိုတွေကျတော့ မရဘူးနော် ရအောင်လုပ်လို့ရလား သိချင်ပါတယ်
Unknown August 17, 2013 at 2:42 PM
အကိုပေါက်ရေကူညီပါအုံးဗျာApkလေးကတော့အကိုပြောသလိုလုပ်လိုက်တာရသွားပါတယ်ဗျာဒါဘေမဲ့ဘေလာ့ကစာသားတွေကကြမလာဘူuးpdata allလုပ်လဲကြမလာဘူးဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောပြပေးပါအကို ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဗျာ
မောင်ပေါက် August 18, 2013 at 2:44 PM
ko kyaw : အဲဒါ ဘလော့လင့်ထည့်တုန်းက http:// ဆိုတာလေး မပါခဲ့လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. http:// မပါခဲ့ရင် RSS Feed က ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ပါဘူး.. ဒါကြောင့် စာသားလေးတွေ မကျတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
ဟုတ်ယ်ကျေးဇူးပါပဲလုပ်လို့ရသွားပြီးနောက်ထက်နည်းပညာများလည်းဆက်လက်တင်းပါပါ လေးစားလျက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အကိုပေါက်ရေ ရသွားပါပြီးဗျာ အကိုပြောသလိုဘလော့လင့်RSS Feedတွေကိုကော်ပီကူးယူးတာမလွယ်ဘူးအကို လက်နဲရေးလိုက်မှာ ရသွားတာဗျ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါအကို အခုစာသားလေးတွေမြင်ရပါပြီဗျာ လူတိုင်းပျော်ရွှင်ရသလို သိသမျှတစ်ခုမကျန်နည်းပညာများကိုပေးဝေးနေတဲ့ အကိုပေါက်နှင့်ဘလော့ကာအကိုများထာဝရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
Unknown August 24, 2013 at 10:11 AM
အကိုပေါက်ကျေးဇူးပါ အကိုပြောတဲ့နည်းလေးအတိုင်းရေးလိုက်တာအခုOffline News Reader Apk လေးအောင်မြင်စွာပြီးသွားပါပြီဗျာ။
သတင်းနှင့်နည်းပညာကဏ္ဌမျိုးစုံကိုဖတ်ရူနိုင်မယ့်Offline News Reader လေးပါBlogs&Websitesပေါင်း(121)ခုထဲ့သွင်းထားပါတယ်။
ကျွုန်တော်ကမုံရွာကပါကျွုန်တော်တို့အညာကဒီလိုသတင်းနှင့်နည်းပညာကဏ္ဌမျိုးစုံကိုဖတ်ရူနိုင်မယ့်Offline News Reade Apkလေးတွေကိုကြိုက်နစ်သက်ကြပါတယ်အကို Tea ဆိုင်တွေမှဆိုလည်း
WiFi Free ပေးကြတော့ဒီလို Offline News Reade Apk လေးတွေထဲ့ပြီuးpdatလေးလုပ်ပြီးသတင်းနှင့်နည်းပညာကဏ္ဌမျိုးစုံကိုဖတ်ရူကြပါတယ်အကို လူကြီးတွေနဲ့လူငယ်တွေပေါ့ ကျွုန်တော်တို့ဆီမှ HWH(ငြုံ)
ကနာမည်ကြီးပေါ့ဗျာကျွုန်တော်လည်းငြုံလေးကိုဖုန်းလေးတဲထဲ့ပြီးလေ့လာပြီးအားကြလာတယ်အကို သုလို့လုပ်ချင်လာတယ်ဗျာဒါနဲ့အကိုဘလော့ကိုအလည်လာရင်ဒီလိုApkရေးနည်းလေးတွေတာပါ အဲအခုတော့ပြီးသွားပါပြီ
ကျွုန်တော်သိပ်လုပ်ချင်နေတဲ့အခုလိုApkရေးနည်းလေးကိုသင်ပြပေးတဲ့အကိုပေါက်( နည်းပညာ ) ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျွုန်တော်မေးသမျှကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့Replyပြန်ပေးနေတာကိုလည်းအတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာ။
( အကိုပေါက် အကို( mail )ကိုမသိလို့အခုလိုComment Box ကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရတာခွင့်လွှတ်ပါအကို )
ကျွုန်တော်ရေးထားတဲ့ မြို့သစ်သားကြီး.Apk Linkလေးပါ
( https://www.dropbox.com/s/2t26ghplyumliap/%E1%81%BF%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%82%95%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%B8.rar )
အကိုရေ သတင်းကရပေမယ့် အကုန်းလုံးရောပြီးတက်တယ်ခင်ဗျ အဲဒါ ဥုံ လိုမျိုးwesite တစ်ခုချင်းစီကြည့်လို့မရဘူးလား အခုကျတော့ သတင်းတူတာတွေထပ်ထပ်ကြည့်ရလို့ပါ
ok ကောင်းတယ် အကို blog ကနေ software တင်နည်းလေးပေးပါဦး
Aung Ko Htet January 3, 2014 at 1:11 AM
Anonymous အစ်ကိုရေ.. အစ်ကိုပြောသလို ဥုံလိုမျိုးလဲ website တစ်ခုတည်းကိုလည်း ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် website လိပ်စာထည့်တဲ့အခါမှ တစ်ခုတည်းကိုပဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါ အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ရွာသစ်သား January 14, 2014 at 1:32 AM
RSS/Atom/Feed(s) ယူလို့မရဘူး ။More imformation မှာ Feeds မပေါ်ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Sai Aung Maine January 14, 2014 at 7:03 AM
အစ်ကိုယ်ကြီး ကျွန်တော်. လုပ်တာမရဘူး AppYetv2 ကျွန်တော် ကဒီလိုပေါ်တာ http://api.ning.com/files/oncLOIv1tO6uYo3Gb7VDSjEfAyRAPVJ6cQcRgEJ8goDlx6MYtlLirRysWYq9IEB28aUeuJGe0OoIoFxFySiAw5R46guk5*uX/aaaaa.jpg ဘယ်လိုလုပ်မလဲခ အဲဒါကို အစ်ကိုယ်ကြီး
THEIN Soe February 15, 2014 at 12:56 PM
ရဲရင့်အောင် February 15, 2014 at 2:54 PM
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ...ဒါပေမယ့်RSS/Atom/Feed(s) ယူလို့မရဘူး ။More imformation မှာ Feeds မပေါ်ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ခင်ဗျာ
OnlineService March 18, 2014 at 2:50 PM
Stars Album June 1, 2014 at 2:40 PM
app yet v3 နဲ့လုပ်နည်းလေးပြောပြပါဦး
Anonymous April 22, 2015 at 2:38 AM
App yet v2 မ​ပေါ်လို့ ငို​တောင်​ငိုချင်​သွားတယ်​ ည၂နာရီခွဲ​ကျော်​ပီ ရ​တေးဝူး :'( ကူညီပါဦး
First Generation September 1, 2015 at 3:08 AM
ဟုတ်ကဲ့အကိုရေ၊ ကျွန်တော်လည်း အရင် Comment ပေးသွားသူတွေလိုပဲ
AppYet V3 ပဲတွေ့ပါတယ်ဗျ။ AppYet V2 ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍလေးမပါဘူးဖြစ်နေလို့ပါဗျ။ တခြားတစ်မျိုးလုပ်လို့ရသေးလားခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါအုံးအကိုရေ၊ အစဉ်လေးစားလျှက်ပါဗျ။
မင်းချစ် May 30, 2016 at 11:57 PM
အကိုရေ ကျွန်တော် APPလုပ်ဖို့ ဖွင့်တာ APPYet v2 ဆိုတဲ့ နေရာပါမလာဘူး အလင်းပြပေးပါအုံး
မင်းချစ် May 31, 2016 at 1:03 PM
အကိုရေ ကျနော်ထဲမှာ AppyetV2ဆိုတဲ့နေရာရှာမတွေ့ဘူး အလင်းပြပေးပါအုံး
မောင်ပေါက် May 31, 2016 at 1:08 PM
Appyet က Version2ကို Support မပေးတော့ပါဘူး.. Version3နဲ့ပဲ လုပ်ရမှာပါ..
Min Lay June 21, 2016 at 10:49 PM